67ha : Hanjakan’ny fanorenana trano tsy ara-dalàna -
AccueilSongandina67ha : Hanjakan’ny fanorenana trano tsy ara-dalàna
67ha : Hanjakan’ny fanorenana trano tsy ara-dalàna
Ny fanotofana tany sy ny fananganana trano samy tsy misy fahazoan-dalana no anisan’ny olana goavana momba ny lafintany eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny lalàna dia tsy maintsy hanaovana fangatahana alefa eo anivon’ny kaomina ny fanorenana. Marihina fa tsy mahasolo ny fahazoan-dalana manorina mihitsy ny fanomezan-dalana avy amin’ny fokontany. Ho an’ny eny amin’ny 67ha izao dia hanjakan’ny fanorenana trano tsy ara-dalàna, ary noho izay tsy fanarahana ity farany izay indrindra, dia nisy mihitsy ny famoizana ain’olona ny herinandro lasa teo. Araka ny fanamarihan’ny lehiben’ny fokontany, 67 ha Avaratra Andrefana, Ranivoarison Liva, ny anjara asan’ny fokontany dia manao ny fangatahana alefa amin’ny kaomina fa tsy manome fanomezan-dalàna hanorina akory. « Tsy anjara asan’ny fokontany na manome na tsia fa ny mampita ny antontan-taratasy fangatahana any amin’ny kaomina no ataony. Ny kaomina ihany no tompon’andraikitra mahefa amin’ny fanomezana ny fahazoan-dalana hanorina». Fa mialohan’izay anefa, dia misy ny fangatahana ny hevitr’ireo mponina manodidina ary mandalo amin’ny tompon’andraikitra ny faritra hoe manaiky na tsia io fanorenana io. Raha vao tsy manome ny heviny ireto farany dia tsy mametraka antontan-taratasy eny amin’ny kaomina ny fokontany. Fantatra mantsy fa tany malalaka no matetika no tsy eken’ny mponina fa trano mbola tsy nahitana olana. Izay miisa 5 hatramin’ny 2010 mankaty.
Fa tena mbola olana hatreto, raha ny fanazavan’ity lehiben’ny fokontany ity ny tsy fisian’ny tamberina amin’ny fangatahana ataon’ny olona avy amin’ny kaomina izay mampirongatra ny fanorenana tsy ara-dalàna. Izany hoe, tokony mba misy fampilazana ny fokontany raha nahazo alalana na tsia ny olona iray hanorina trano. “Izay no olana satria na efa nisy aza ny fitarainana nalefa tany amin’ny kaominina nanomboka ny taona 2009 nandraisako ny fahefana dia tsy misy valiny. Tsy mba ohatra ny fivarotana toaka, raha vao manome fahazoan-dalana mpivarotra toaka ny tompon’andraikitra mahefa amin’izany dia misy kopia an’ilay fahazoan-dalana alefa aty aminay”, hoy i Ranivoarison Liva hatrany, lehiben’ny fokontany 67 ha Avaratra Andrefana. Ny trangan-javatra tahaka izay ihany no antony namoizana ny ain’olona teny amin’ity fokontany ity, ny herinandro lasa iny. Raha tsiahivina, dia lehilahy 28 taona mpanao trano no namoy ny ainy no tsy tra-drano rehefa natsipin’ny herinaratra. Teny 67ha akaikin’ny Assurance Mama no nitrangan’ny loza. Raha ny fantatra tamin’izay fotoana izay dia sendra niakatra tany amin’ny tafon’ilay trano namboariny efa eo an-dalam-pamitana io lehilahy io tamin’io fotoana io, no voakasoky ny tariby mpitondra herinaratra niboridana sy nikirazorazo notsofin’ny rivotra ka natsipin’izany avy hatrany ary maty tsy tra-drano. Raha mba nisy ny fandraisana andraikitry ny kaominina amin’ny fampilazana ny fokontany mialoha hoe nahazo alalana na tsia mantsy dia mety tsy nitranga ny toa ireny. Nomarihin’ny lehiben’ny fokontany moa fa tokony niresaka tamin’ny Jirama ny tompon-trano mialohan’ ny hametraka “auvent” satria efa mirefy 1 metatra 30 ny elanelan’ny “auvent” sy “haute tension”. Mbola notsipihany àry fa ovaina ny rafitra misy momba ny fokontany satria tsy misy mandeha amin’ny laoniny. “Tokony hiala amin’ny fokontany daholo ny zavatra rehetra satria tsy mandidy manapaka fa lasa mampahafantatra ny zava-misy sisa no anjara asan’ ny fokontany”, hoy hatrany Ranivoarison Liva, lehiben’ny fokontany 67 ha Avaratra Andrefana.